Guddoonka baarlamaanka Carabta oo bogaadiyay dhismaha isbaheysiga Badda Cas - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)- Baarlamaanka Carabta ayaa soo dhoweeyay hindisaha cusub ee uu Sucuudigu keenay ee lagu dhisayo urur dowlado ay ku mideysanyihiin dowlado carbeed oo isugu jira dowladaha ku teedsan Badda Cas iyo gacanka Cadan.
Todobaadkii la soo dhaafay Sucuudiga ayaa bilaabay dhoolatus wadajir ah oo ay ka qeyb galeen ciidamada badda ee todobada dowladood ee ku teedsan Badda Cas kuwaa oo kale Masar, Yemen, Jabuuti, Urdun, Suudaan iyo korjoogto ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya.
Afhayeenka Baarlamaanka Carabta Dr. Mishcal Fahmi ayaa aad u soo dhoweeyay hindisaha cusub ee ay keentay dowladda Sucuudiga iyo dowrka culus ee ay ciyaartay iyadoo la wada ogyahay caqabadaha kala duwan ee dowladaha Carabtu wajahayaan si sare loogu qaado wada shaqeynta waddamada Carabta ee dhanka ammaanka iyo deganaanshaha gobolka iyo guud ahaan Caalamka.
Afhayeenka ayaa ku bogaadiyay boqorka Sucuudiga Salmaan Bin Cabdulcasiis iyo Dhaxal Sugaha Sucuudiga Maxamed Bin Salmaan oo isugu yeeray qabashada kulankan muhiimka ah oo fududeeyay aasaaska Koox muhiin ah.
Mishcal Alsalami ayaa ku tilmaamay aasaaska ururkan cusub mid muhiimad istiraatiiji ah u leh ilaalinta xudduudda biyaha ee wadamada Carabta.
Waxa uu sheegay in tillaabadani ay ammaan u horseedi doonto Badda Cas, taas oo muhiimad weyn u leh ganacsiga waddamada Carabta iyo guud ahaanba ganacsiga caalamiga ah halkaas oo uu maro 13% guud ahaan ganacsiga caalamka.
Guddiga xalinta khilaafaadka oo ku dhawaaqay xildhibaannada cusub ee baarlamaanka Puntland